Israa’iil oo dhaqaale ku bixineysa inay guuraan Falastiiniyiinta | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Israa’iil oo dhaqaale ku bixineysa inay guuraan Falastiiniyiinta
Israa’iil oo dhaqaale ku bixineysa inay guuraan Falastiiniyiinta
Wargeys laga leeyahay Dalka Israa’iil ayaa shaaca ka qaaday qorshe uu wado Xisbiga Qaranka ee dalkaasi oo ujeedadiisu ay tahay in Falastiyiinta ay u haajaraan dalalka Carabta, iyada oo la kordhinayo deegaameynta Yahuuda ee daanta Galbeed, si looga hortago dhismaha Dowlad ay leedahay Falastiin.
Qoraa u dhashay Israa’iil Chaim Levinson oo ka tirsan Wargeyska Haaretz oo soo xiganaya Bezalel Smotrich oo ah xubin ka tirsan Xisbiga Garabka Midig ayaa sheegay in qorshahaan uu qeyb ka yahay in la burburiyo Hay’adaha Falastiin iyo in sare loogu qaado deegaameynta.
Xisbiga ayaa maalgalin doono olale xagga internetka ah oo lacag magdhow lagu siinayo Dadka ogalaada in ay u guuraan dalalka dariska ee Carabta, taasi oo ay soo jeediyeen sharci yaqaano ka tirsan Xisbiga.
Smutrich oo qeyb ka ah Olalahaan ayaa sheegay in mashruucaan uusan qeyb ka aheyn dhaqaalaha ku baxaya barakacinta, hase ahaatee laga caawinayo qarashaadka dhoofka iyo magdhowga iyaga oo aan la qasbeyn, isaga oo intaasi ku daray ra’i aruurin la sameeyay ay muujineyso in %30 Dadka Falastiin ay daneynayaan Dibadda.
Waxa uu intaasi ku daray Smutrich in haddii lagu guuleysto in sanad kasta 20,000 oo u dhashay Falastiin ay ka baxaan daanta galbeed in taasi ay oga sahlan tahay dhaqaalaha Israa’iil oga baxa dagaalada iyo howllgalada sanad kasta.
Warbixinta Wargeyska ayaa sidoo kale lagu sheegay in kuwa daneynaya in ay sii joogaan daanta galbeed ee dhulalka la heysto la siinayo sharciga Muwaadinimo ee Israa’iil, haddii ay ka tanaasuaalaan rabitaankooda oo diyaar u yihiin ay ka mid noqdaan Israa’iil.
Israa’iil ayaa qabsatay dhulalka reer Falastiin 1967, waxaa marar badan fashilmay heshiiyo nabadeed oo xal loogu raadinayo colaada labada dhinac
Yahuuda wali waxa ay wada deegaameynta, halka falastiin ay sheegtay in ay aqbaleyso Dowlad ku dhisan xuduudihii 1967 caasimadeednu ay tahay Qudus.
Previous articleXildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya oo Maanta Ka hadli doono go’aankii Xukuumadda Soomaaliya ………..
Next articleCulimada Soomaaliyeed ee ku nool South Africa oo shir muhiim ah uga furmay Johannesburg